Romelu Lukaku oo fariin u diray jamaahiirta kooxda Manchester United kadib guushii ay ka gaareen Burnley – Gool FM
Romelu Lukaku oo fariin u diray jamaahiirta kooxda Manchester United kadib guushii ay ka gaareen Burnley
(Premier League) 03 Sab 2018. Weeraryahanka kooxda Manchester United Romelu Lukaku ayaa sheegay kadib markii uu dhaliyay 2-dii gool ay guusha kaga gaareen kooxda Burnley in Red Devils ay yeelato maskax guuleed kulamada xili ciyaareedkan ee horyaalka Premier League.
“Waxaan leenahay maskax, laakiin waxaan u baahanahay inaan si xoogan u muujino, taasina waa waxa uu tababaraha doonayo, waana waxa aan u baahanahay inaan sameyno”.
“Waxaan dooneenay inaan goolal badan dhalino qeybtii hore ee ciyaarta, sidoo kale qeybta labaad, laakiin waxaan u ciyaarnay si ka wanaagsan xili ciyaareedkii hore, waxaana naga muuqda hormar ku aadan dhanka qaab ciyaareedkeena”.
Romelu Lukaku ayaa dhinaca kale xaqiijiyay in Manchester United ay ka soo ficnaan doonto in badan, kadib labadii guuldaro xiriir ka ahaa ay kala soo kulmeen kooxaha Tottenham Hotspur iyo Brighton.
“Dadku waxay arki doonaan sida aan kaga soo muuqan doono kulamada soo aadan si ka duwan sidii hore”.
Manchester United ayaa kulankeeda soo aadan ee horyaalka Premier League waxay kula ciyaari doonaan kooxda Watford 15-ka bishan September.
DEG DEG: FIFA oo ku dhawaaqday 3-da tartame ee isugu soo haray abaal marinta The Best (Messi oo .....)!
Thibaut Courtois iyo Zidane oo u kala tartamaya goolhayaha iyo tababaraha ugu fiican adduunka